Ungawavula kanjani amafayela e-CBR - VidaBytes | I-LifeBytes
U-Iris Gamen | 23/06/2022 20:00 | Aplicaciones
Amafayela edijithali esingawathola ezinkundleni ezihlukene ze-inthanethi angajatshulelwa ngokusebenzisa amadivaysi ahlukene ku-PDF, i-Word, i-JPG noma ezinye izandiso okungenzeka kube okokuqala uzibona futhi ezingavulwa kuphela ngezinhlelo zokusebenza ezithile. Namuhla sizokhuluma ngokuthi uwavula kanjani amafayela e-CBRNjengoba abaningi benu cishe sebazi, zingamafayela aqukethe izithombe ezahlukene ezingabukwa kusetshenziswa izinhlelo zokusebenza ezithile.
Lolu hlobo lwefomethi yefayela luhlobene kakhulu nomhlaba wamahlaya., nakuba ingatholakala kwezinye izinhlobo zamafayela. Uma ungumthandi wamahlaya, ngokuqinisekile ubufuna ukuwajabulela izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, kodwa awazi ukuthi ulivula kanjani ifayela le-CBR elishiwo, lokhu kuzophela ngenxa yamaqhinga esizokunikeza wona kulokhu kushicilelwa.
1 Ayini amafayela e-CBR?
2 Izinhlelo zokuvula amafayela e-CBR ku-Windows
3 Izinhlelo zokuvula amafayela e-CBR ku-Mac
3.1 Umbukeli Wamahlaya Wamahlaya
3.2 I-DrawStrip Reader
4 Izinhlelo zokusebenza zokuvula amafayela e-CBR ku-Android noma ku-IOS
4.1 Isikrini samahlaya
Ayini amafayela e-CBR?
Lawa mafayela e-CBR afana namanye amaningi esizobe sihlangane nawo ngaphezu kwesisodwa, i-ZIP noma i-RAR, uchungechunge lwamadokhumenti acindezelwe. Omunye umehluko omkhulu wamafayela e-CBR ukuthi lawa ziqukethe izindaba ezigcwele ukulandelana kwezithombe. Lezi zithombe zibekwe ngokulandelana okuthile, ukuze kuthi uma ejabulela kwenziwe ngendlela ehlelekile.
Amafayela e-CBR, ngokuvamile njengoba sibonisile ekuqaleni kokushicilelwa, asetshenziselwa ukugcina amahlaya ngedijithali. Kuyifomethi, engabonisi noma yikuphi ukwehluleka lapho i-decompress ngezinhlelo zokusebenza ezithile zayo ezifana neWinZip.
Umqambi wale fomethi yefayela nguDavid Ayton, owathi ngeminyaka yawo-90s wenza isoftware yokubuka amahlaya ngaphandle kwezinkinga, le software kwakuyi-CDisplay.. Ukwethulwa kwalolu hlelo olusha kwaba uguquko olukhulu emhlabeni wokubukwa kwezithombe okhona kuze kube manje.
Ngenxa ye-CDisplay, ukulandelana kwezithombe kubonwe esibukweni ngobukhali obukhulu.z, ikhwalithi kanye nemininingwane, njalo ihlonipha ukuhleleka okumakiwe lapho ufunda izigigaba ezilandiswa phakathi kwamakhasi.
Iziqalo ze-“CB”, ezivamile zalolu hlobo lwefayela, zivela eNcwadini Yamahlaya, ifomethi edalwe ngokukhethekile ukuze ikwazi ukuyivula kusetshenziswa isofthiwe ye-CDisplay. Uma ngesikhathi se ukulanda lawa mafayela ubheka uhlamvu lokugcina, lokhu kubhekisela ohlotsheni lokucindezelwa olusetshenzisiwe, okungukuthi, uma kungefayela le-RAR, izovela .cbr, ngakolunye uhlangothi uma kuyi-ZIP, ifayela lizovela eliqanjwe ngokuthi .cbz.
Uma usukulungele kakhulu ukuqhubeka noma ukuqala ukujabulela izindaba zamahlaya akho owathandayo, Sikulethela ukukhethwa kwezinye izinhlelo ezingcono kakhulu ongazilanda futhi uvule lolu hlobo lwefayela ngendlela elula nengenaphutha, esigabeni esilandelayo. Ngeke sibone kuphela izinhlelo ezikhonjiswe labo basebenzisi be-Windows, kodwa nalabo abasebenzisa i-Mac. Ngaphezu kwezinhlelo zokusebenza zeselula ze-Android ne-IOS.
Izinhlelo zokuvula amafayela e-CBR ku-Windows
Uma ungumsebenzisi we-Windows futhi ufuna ukwazi nokufunda ukuthi ungawavula kanjani amafayela e-CBR, ungathola eyodwa yalezi zinhlelo ezilandelayo esizozibalula.
Asikwazanga ukusho lolu hlelo ohlwini lwethu futhi sibonga umdali walo ngombono wokwenza lolu hlobo lwefomethi nakho konke okuzungezile. I-CDisplay, Iwuhlelo olulula kakhulu lwamakhompiyutha, kodwa ngesikhathi esifanayo lusebenza kahle kakhulu Futhi ngaphandle kokukhohlwa ukuthi kumahhala ngokuphelele.
Wuhlelo osekusetshenzwe kulo ngokukhethekile nolunye lwezintandokazi ngabathandi bamahlaya. Inikeza umuzwa omuhle wokufunda, ukwazi ukufunda amafomethi ahlukene njenge-PDF, CBR, CBZ, phakathi kokunye. Amahlaya alayishwa ngemizuzwana ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi nokuhlonipha zonke izinhlobo zemininingwane.
Enye yezinhlelo ezinhle kakhulu, ngokuya ngokufunda amafayela e-CBR ikhonjiswe ukufunda amahlaya kukhompuyutha. Ngale software, awukwazi ukujabulela nje izindaba ezixoxwa phakathi kwamakhasi amahlaya, kodwa futhi ungahlela okuqukethwe kwedijithali.
Iphuzu elihle lalabo bantu abanomona wokwabelana ngamafayela abo, yilokho I-Gonvisor ikunikeza ithuba lokuvikela amadokhumenti akho okufunda ngokusebenzisa iphasiwedi. Inketho enikeza inani kulolu hlelo.
Izinhlelo zokuvula amafayela e-CBR ku-Mac
Kuleli qophelo lapho ukhona, sizobona izinhlelo ezahlukene abasebenzisi be-Mac abazokwazi ngazo ukuvula amafayela e-CBR ngaphandle kwezinkinga.
Umbukeli Wamahlaya Wamahlaya
Ngalolu hlelo lokuqala esiluletha kulolu hlu, ngeke ukwazi ukuvula amafayela e-CBR kuphela, kodwa futhi namafayela e-CBZ nawe-PDF. Ngesixhumi esibonakalayo esilula kakhulu, uzokwazi ukuzulazula ngokushesha kukho konke okuqukethwe ekunikeza kona. Lokhu kwenziwa kwaba lula ngenxa yezithonjana ezethulwa kuwena.
Okunye okukhangayo okuyinhloko ukuthi isekela ukufundwa nokubuka kwamakhasi amabili. Ngale nketho yokubonisa, inhloso ukulingisa ukufunda kwamahlaya ngokomzimba, njengokungathi uguqula amakhasi ukusuka kwesokudla ukuya kwesokunxele ngeminwe yakho. Ungaba nalolu hlelo kudivayisi yakho nge-App Store ngama-euro angu-5.49.
Njengezinhlelo ezimbalwa ebesizibalula, i-DrawnStrip Reader iphinde ihambisane nezinye izinhlobo zamafomethi ngaphezu kwe-CBR, njengokuthi; CBZ, CB7. CBT, ZIP, RAR, phakathi kwabanye. Le softhiwe esikhuluma ngayo yenzelwe izikrini ze-retina, futhi ikunikeza ithuba lokuguqula lawa mafayela kwamanye amafomethi.
Iphinde ikuvumela ukuthi ukhiphe izithombe kumafayela akho owathandayo, futhi ukwazi ukwabelana ngawo. Iphuzu elihle kakhulu ukuthi likunikeza ukukhanya nokulungiswa kokuqhathanisa ukuze uzivumelanise nokuncamelayo. Ungathola i-DrawnStrip Reader ngokuyithenga esitolo se-Apple ngentengo yama-euro angu-4.49.
Izinhlelo zokusebenza zokuvula amafayela e-CBR ku-Android noma ku-IOS
Kulesi sigaba sokugcina, sizobona uchungechunge lwezinhlelo zokusebenza eziboniswa ukujabulela lolu hlobo lwamafayela kumadivayisi ethu eselula ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwephutha lokulanda noma lokubonisa.
Enye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ozokwazi ukuzithola emakethe yamadivayisi we-Android, ongajabulela ngawo womabili amafayela e-CBR nawe-CBZ. Ayigcini lapho kuphela, kodwa futhi iyahambisana nezinye izinhlobo zamafomethi afana ne-JPG, GIF, PNG noma i-BMP.
Kuyinto isicelo samahhala ngokuphelele, kodwa ngokuqukethwe kokukhangisa, ongakwazi ukukususa uma uthenga uhlelo lokusebenza oluyinqwaba. Qaphela ukuthi akugcini nje ngokukuvumela ukuthi ucindezele amafayela e-CBR ne-CBZ ngokuqondile, kodwa ungakwazi futhi ukufinyelela izithombe ngokuzimela.
Kubasebenzisi be-IOS, sikulethela lokhu uhlelo lokusebenza olulula kakhulu inhloso yalo enkulu ukukuvumela ukuthi ufunde amafayela e-CBR ne-CBZ. Ngayo, ungafinyelela amafayela agcinwe kumasayithi ahlukene edijithali njengeDropbox, IDrayivu, i-OneDrive, njll.
Ukulanda amafayela akhethiwe kunoma iyiphi iwebhusayithi kwenziwa ngokuqondile kudivayisi yakho yeselula. Njengasendabeni edlule, uhlelo lokusebenza lwamahhala olutholakala esitolo se-Apple.
Kuze kube manje, uhlu lwethu oluneziphakamiso ezahlukene zezinhlelo nezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo ukuze ukwazi ukungena ezindabeni ezijabulisayo zomhlaba wamahlaya. Kufanele wazi kuphela, yiluphi uhlelo noma uhlelo lokusebenza olukhonjisiwe ngokuya ngedivayisi lapho ufuna ukuqala ukufunda, ukulanda, ukufaka nokuqala ukuyijabulela.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Aplicaciones » Uwavula kanjani amafayela we-CBR
Ungazibona kanjani izindaba ze-Instagram ngaphandle kokuqashelwa